ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ | Page4| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ခါး နာတာလား ... တင်ပါး နာတာလား ...
16.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ခါး နာတာနဲ့ တင်ပါး နာတာဟာ ထပ်နေလေ့ရှိကြတယ်။
>> ဘယ်အချိန်မှာ တင်ပါး နာတတ်သလဲ?
ခဏခဏ နှာချေ နှာရည်ယိုနေတဲ့ ထိပ်ကပ်နာဆိုတာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဖြစ်နေကျပြဿနာတစ်ခုပေါ့။ အင်မတန်ခံရခက်တဲ့ ထိပ်ကပ်နာရောဂါအေ...
သင့်ကို အမှန်တကယ် အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အသက်ရှူနည်း
လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသက်ရှူလို့ရှူနေမှန်း သတိမထားဖြစ်ကြပါဘူး။ ရှူသွင်းရှူထုတ်တာကို အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ နေလိုက်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မိမိက...
ကလေးရဖို့အတွက် ဗီတာမင် C က ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်သလဲ
15.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေတာ၊ အအေးမိ ချောင်းဆိုးတာတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တာတွေအပြင် ဗီတာမင် C က မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကိုပါ ကောင်းစေပါသတဲ့။ ကလေးရ...
စအိုဝ ယားတဲ့အခါ ...
စအိုဝ ယားယံပြီးတော့ ကုတ်မရဘဲ ထိုင်မရ၊ ထမရ ဖြစ်ဖူးကြပါသလား? အတော်အနေရခက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါပဲနော်။
ဒီလို ယားယံတာကို သက်သာေ...
14.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ကျွန်မတို့တွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ TV ဖန်သားပြင်ကတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ ညစာရှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ညစာစောစောစားခြင်းဟာ ၀ိတ်ကျဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ြေ...
ထိုင်ရာကနေ ရပ်လိုက်တဲ့အခါ ဒူးဆစ်များ တဂျွတ်ဂျွတ်မြည်ခြင်း၊ အစာဝါးနေစဉ် မေးရိုးက အသံများမြည်ခြင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်လိုက်တိုင်း အသံမျ...
အနှိပ်ခံခြင်း မာဆတ် (massage) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းသောအယူများ
13.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ယခုအခါ အနှိပ်ခံခြင်းကို လူကြီးလူငယ်မရွေး နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှိပ်နယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆ အမှားလေးများကို ဖော်ြ...